लकडाउन र “धर्ती” हिंसा – दिव्य रोशनी अनलाईन
लकडाउन र “धर्ती” हिंसा
आज विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएर वितण्डा मच्याइरहेको कोरोना भाईरस, जस्ले आम मानव जातीलाई त्राही त्राहीमा जीउन बाध्य बनाएको छ । विश्वव्यापी रुपमै खैलाबैला मच्चाएको छ । साँच्ची भन्नु पर्दा मैले जीवनका कैयौं बसन्तहरू पार गरे तर यस्तो त्रासपूर्ण परिस्थितिको सामान पहिलो पटक गर्दैछु । थाहा छैन मलाई मात्रै यस्तो अनुभूति भएको छ कि अरुलाई पनि ? अरुबेला खोकी लाग्दा वास्तै हुन्थेन, यसो खोकी लाग्थ्यो २,४ दिनमा निको भैहाल्थ्यो, वास्त हुन्थेन । तर अहिले लाग्ने रुघाखोकी भने विशेष छ । त्यसै शंकैशंकामा लंका पुगिएकै छ । बेलुका राम्रै सुत्यो विहान उठ्दा यसो अलि अप्ठेरो महसूस भयो कि बा मलाई त‘.भनेर फेरि त्यतै त्रास । थाहा छैन यो त्रास कहिलेसम्म हो खै, अन्धकार छ अगाडि । आज विश्वमा यही कोरोनाकै कारण कैयौंले ज्यान गुमाई सके भने कैयौं संक्रमितहरू अस्पतालका बेडहरूमा छटपटाई रहेका छन् ।
यो विषयमा नेपालमा भने सरकारको ध्यान नगएको अवस्था छ अहिले । यस्तो अवस्थामा सरकार झन् संवेदनशील भएर सोच्नु पर्नेमा झन् भएको सेवा पनि निष्कृय पारिएको छ । एउटी जान्ने बुझ्ने महिलामाथि हिंसा भए पनि कहाँ कुन निकायमा जाने भन्ने अत्यौल छ । सरकारले यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित महिलाहरूको उद्धारको लागि केही योजनाहरू तुरुन्त ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । महिला हिंसाको विषयलाई सम्बोधन गर्न सबैपक्ष संवेदनशील हुन अति नै आवश्यक छ आज । महिलामाथि भैसकेका हिंसाका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । किनकी यो समस्या महिलाको मात्र समस्या होईन। यो समग्र देशको समस्या हो, महिला पुरुष दुबैको समस्या हो। यस विषयमा संवेदनशील होऔ, संवेदनशील भएर सोचौं ।( साभार महिला खबर)
← कोरोना लक्षण देखिए घरैमा बस्ने कि क्वारेन्टाइन सेन्टर जाने?
कोरोना कहर ः यसरी गरौं स्रोतको व्यवस्थापन →